သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ??? – Gentleman Magazine
သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ???
17/06/2017 17/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]သင်…. ဘာလို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲ ???
သငျ…. ဘာလို့ မအောငျမွငျသေးတာလဲ ???
သငျက အရညျအခငျြးရှိသူတဈယောကျ၊ အလုပျကွိုးစားသူတဈယောကျ ဖွဈပမေယျ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ လှဲခြျောနတေယျ။ သငျက ဉာဏျကောငျးတယျ၊ တီထှငျဖနျတီးမှုအားကောငျးပွီး ခံစားသကျဝငျမှုလညျး ကောငျးရဲ့သားနဲ့ အိုငျဒီယာထုတျတဲ့အစညျးအဝေးတှမှော ပါးစပျပိတျအသံတိတျနရေတယျ။ စီမံကိနျးတဈခုလုံးကို လုပျပွလိုကျနိုငျစှမျးရှိတယျဆိုတာကို သိထားပမေယျ့ တကယျလုပျရတဲ့အခါမှာ ပငျပနျးငွီးငှပွေီ့း မလုပျခငျြမကိုငျခငျြဖွဈလာတယျ။ တဈခုမှ ပုံမှနျမဟုတျသလိုဖွဈနမေယျ။ အကောငျးဆုံးလုပျနပေမေယျ့ အကောငျးဆုံးဖွဈမလာဘူး။ အလုပျကို အခြိနျပိုလုပျပွီး အာရုံစိုကျထားခငျြလို့ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့လညျး မတှဖွေ့ဈဘူး။
ဒီလိုတှဖွေဈနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ ပွညျ့ဝဖို့အတှကျ အလုပျနဲ့ ဘဝ ကွားမှာ သငျအခကျတှနေ့ရေတာပဲဖွဈပါတယျ။ စိတျကူးထားတာတှကေို ဘာဖွဈလို့ ဖွဈအောငျမလုပျနိုငျတာလဲ၊ ဘာဖွဈလို့ မအောငျမွငျသေးတာလဲဆိုတာကို အဖွရှောကွညျ့ဖို့ လိုနပေါပွီ။
အောငျမွငျဖို့အတှကျ အလုပျကွိုးစားရမယျလို့ ပွောလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အလုပျကွိုးစားနရေဲ့သားနဲ့ မအောငျမွငျဘူးဆိုရငျတော့ သငျ့ကို အောငျမွငျမှုနဲ့အလှမျးဝေးအောငျ အဟနျ့အတားဖွဈစနေိုငျတာတှကေို ဆနျးစဈပွငျဆငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
စိုးရိမျမှုက အောငျမွငျမှုကို အကြိုးမပွုပါဘူး။ အောငျမွငျဖို့အတှကျ သတ်တိရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ကရြှုံးသှားမှာကို စိုးရိမျနရေငျ အမှားတှလေုပျမိပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျစိုးရိမျသောကတှကေ သငျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျကို အပွညျ့အဝ အသုံးမခနြိုငျအောငျ ဟနျ့တားနမှောပါ။ အမှားလုပျမိဖို့ မကွောကျပါနဲ့။ အအောငျမွငျဆုံးဆိုတဲ့ လူက အမှားတှေ အမြားကွီးလုပျခဲ့ဖူးသူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမှားကို အလြှော့ပေးလို့ မရပါဘူး။ သောမတျအကျဒီဆငျသာ ကရြှုံးမှုကို စိုးရိမျပွီး စမျးသပျမှုနညျးနညျးလောကျလုပျကွညျ့လို့ အဆငျမပွတောနဲ့ လကျလြှော့ခဲ့မယျဆိုရငျ လြှပျစဈမီးလုံးကို တီထှငျနိုငျခဲ့မှာ မဟုတျပါဘူး။
၂။ မိမိကိုယျကို မရိုးသားခွငျး
အခုလို ရှေးခယျြစရာတှေ မြားလှနျးလှတဲ့ခတျေကာလမှာ သငျ့ရဲ့ ထူးခွားမှုနဲ့ သီးခွားဖွဈတညျမှုတှကေို ထိနျးသိမျးနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အမြားနဲ့အတူရောလိုကျတာက လကျမခံနိုငျစရာမဟုတျပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအတှေးအချေါ၊ ကိုယျပိုငျဖွဈတညျမှုကို ဆုံးရှုံးခံလိုကျရတာပါပဲ။ သငျကိုယျတိုငျက စိတျမပါပမေယျ့ အမြားကိုဆန်ဒကို လိုကျလြောလိုကျရပွီး ကိုယျပိုငျအမွငျကို ထုတျဖျောမပွောဖွဈလိုကျတာမြိုး ဘယျနှဈခါ ဖွဈပွီးပွီလဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ အမြားနဲ့ ဆနျ့ကငျြရဖို့ကိုလညျး မကွောကျပါနဲ့။ ခဏတာအတှကျတော့ အထီးကနျြသလိုဖွဈနပေမေယျ့ မိမိကိုယျကို အရိုးသားဆုံး ဖွဈတညျခှငျ့ရမှာပါ။ အမီတာဘခမျြးဟာ သူ့အသံကွောငျ့ ရဒေီယိုအစီအစဉျမှာပါဝငျဖို့ ငွငျးပယျခံရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုဆိုရငျ ဘောလိဝုဒျရဲ့ ဂန်တဝငျသရုပျဆောငျကွယျပှငျ့ဖွဈလာပွီး သူ့အသံကိုက ဆှဲဆောငျမှုတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိမိကိုယျကို မိမိရိုးသားပါ။ သီးခွားဖွဈတညျမှုကို လကျခံပါ။
၃။ အလုပျကို အလှနျအကြှံအခြိနျပေးခွငျး
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျထှကျပွီး သောကျဖို့စားဖို့တောငျ အခြိနျမပေးပဲ အလုပျကိုပဲ စောကျခလြုပျနသေူတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါပမယျေ့ အလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ညညျးညူနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျကို ဆိုးဆိုးရှားရှားသကျရောကျမှုတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခံစားမှု၊ တှေးချေါမှုနဲ့ ပွောဆိုမှုတှကေ စိတျအခွအေနကေို ဖျောပွနပေါတယျ။ အပွုသဘောဆောငျတဲ့အတှေးတှကေ ကောငျးမှနျတဲ့ရလဒျတှကေို ထှကျပျေါစပေါတယျ။ အလုပျကို အလှနျအကြှံအခြိနျပေးနမေယျဆိုရငျ အလုပျကို၊ အလုပျရှငျကို၊ လုပျနရေတဲ့ဘဝကို မုနျးတဲ့စိတျတှေ ပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုဖွဈဖူးလား ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ပါ။
၄။ နှလုံးသားကပွောတဲ့စကားကို နားမထောငျခွငျး
တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျက လုပျခငျြတာမဟုတျပမေယျ့ လုပျသငျ့တယျလို့ ထငျလို့ ဒါမှမဟုတျ အမြားကလုပျတဲ့နညျးလမျးဖွဈနလေို့ လိုကျလုပျကွရတာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလိုလုပျမယျဆိုရငျ အမြားနဲ့ရောလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမြားနဲ့ရောလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ သငျ့ရဲ့ဆနျးသဈတီထှငျနိုငျစှမျးတှေ ပြောကျဆုံးပွီး သာမနျအဆငျ့မှာပဲ ရှိနမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့နှလုံးသား၊ မသိစိတျက ပွောတဲ့စကားကို နားထောငျပွီး ဘာလုပျသငျ့လဲဆုံးဖွတျပါ။ အမြားယောငျတိုငျး လိုကျမယောငျပါနဲ့။
၅။ မိမိကိုယျကို အခွားသူမြားနဲ့ နှိုငျးယှဉျခွငျး
စိုးရိမျသောကမြားတဲ့သူအတှကျ စိတျဓာတျကစြရာတှကေ အမွဲတမျးရှိနတေတျပါတယျ။ သငျ့ထကျ ပိုတျောတဲ့၊ ပိုထကျမွကျတဲ့၊ ပိုသငျ့တျောပွီး ပိုပြျောရှငျနတေဲ့သူတှကေို ကွညျ့ပွီး စိတျဓာတျကနြလေို့ မဖွဈပါဘူး။ အခွားသူတှကေို ကွညျ့နမေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျကွညျ့နိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အခွားဘယျသူနဲ့မှ မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့။ ပွိုငျဆိုငျမှုရှိတာက ကောငျးပမေယျ့ မနာလိုတာမြိုးဖွဈလာရငျတော့ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့အခြိနျနဲ့ ခှနျအားကို ဖွုနျးတီးပဈရာရောကျပါတယျ။
အစီအစဉျမရှိပဲ တုံးတိုကျတိုကျကြားကိုကျကိုကျ ဘဝကိုရငျဆိုငျတာက လနျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အောငျမွငျဖို့အတှကျဆိုရငျတော့ အစီအစဉျတဈခုရှိဖို့ လိုပါတယျ။ အစီအစဉျလို့ ပွောတဲ့နရောမှာလညျး အသကျ(၄၀)မှာ ငါ စီးအီးအိုတဈယောကျဖွဈရမယျဆိုတဲ့ ရှငျးလငျးတိကမြှုမရှိတဲ့ အစီအစဉျမြိုးမဟုတျပဲ နောကျနှဈမှာ ဒီအရညျအသှေးတဈခုကို ကြှမျးကငျြနရေမယျ စတဲ့ ဖွဈနိုငျခနြေီးစပျပွီး ရှငျးလငျးတဲ့ အစီအစဉျမြိုး ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ အလုပျကို ခဈြပွီးကွိုးစားပမေယျ့ ရညျမှနျးခကျြမရှိပဲ လှုပျရှားနလေို့ မဖွဈပါဘူး။
၇။ ပတျဝနျးကငျြမှာ အဆိုးမွငျသမားတှေ မြားနခွေငျး
သငျ့မိသားစုက သငျ့ရဲ့အလုပျကို လေးစားမှုရှိရဲ့လား။ သငျ့မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှကေရော သငျ့အလုပျကို ကဲ့ရဲ့ဝဖေနျတာတှေ ရှိပါသလား။ သငျလုပျတဲ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး မကောငျးမွငျတဲ့လူတှေ သငျ့အနားမှာ ၀ိုငျးနမေယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ယုံကွညျမှုနဲ့ အလုပျပွီးမွောကျနိုငျစှမျးကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ အလုပျအပျေါမှာလညျး ယုံကွညျသကျဝငျမှုနဲ့ အပွုသဘောဆောငျမှု ပြောကျဆုံးပွီး အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနိုငျစှမျးမရှိ ဖွဈစပေါတယျ။
၈။ နတေ့ဈဝကျကို ဖွုနျးတီးပဈခွငျး
စောစောထတဲ့ငှကျတှကေ အစာပိုရပါတယျ။ နောကျကမြှ အိပျရာဝငျပွီး မနကျစာနဲ့ နလေ့ညျစာပေါငျးစားတာ၊ အလုပျကို နောကျကမြှစလုပျတာတှကေ သငျ့ရဲ့အလုပျနဲ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ မကောငျးပါဘူး။ တဈခြို့တှကေ ပွောကွပါတယျ။ သူတို့က ညနပေိုငျးမှာ အလုပျလုပျတတျသူတှဖွေဈတာကွောငျ့ မနကျခငျးက အရေးမကွီးဘူးလို့ ဆိုကွပါတယျ။ မနကျခငျးမှာ အလုပျလုပျလို့မရဘူးဆိုရငျတောငျမှ ညနခေငျးမှာ လုပျရမယျ့အလုပျတှအေတှကျ အစီအစဉျခတြာ၊ စဉျးစားတာတှကေို လုပျသငျ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာမှာ အအောငျမွငျဆုံးဆိုတဲ့လူတှကေ မနကျအစောကွီးကတညျးက အိပျရာထပွီး ကြှနျတျောတို့ မနကျစာစားနတေဲ့အခြိနျမှာကတညျးက တဈနစေ့ာအလုပျတှကေို စလုပျနကွေပါပွီ။
၉။ ကနျြးမာရေးကို ဂရုမစိုကျခွငျး
နစေ့ဉျယှဉျပွိုငျမှုတှနေဲ့ ရှငျသနျနရေတဲ့ဘဝမှာ အလဲထိုးနိုငျတဲ့အရာတဈခုက ကနျြးမာရေးပဲဖွဈပါတယျ။ မနကျစာမစားဖွဈတာ၊ အမွနျစာတှေ အစားမြားတာ၊ ကျောဖီနဲ့လကျဘကျရညျတှေ အသောကျမြားတာ၊ ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးတှအေတှကျ အခြိနျမပေးတာ၊ ဆေးလိပျသောကျတာ စတဲ့အမူအကငျြ့တှကေ သငျ့ရဲ့ အဟာရဓာတျတှကေို လြော့နညျးစပွေီး အလုပျလုပျဖို့ စှမျးအငျတှေ နညျးသှားစပေါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ လိုအပျတဲ့ခှနျအား မစိုကျထုတျနိုငျတဲ့အတှကျ အောငျမွငျမှုနဲ့ အလှမျးဝေးနဦေးမှာ သခြောပါတယျ။
၁၀။ မိမိကိုယျကို ကောငျးစှာမဖျောထုတျနိုငျခွငျး
အရညျအခငျြးရှိပွီး အလုပျကွိုးစားပမေယျ့ ဘာမှဖွဈမလာဘူး။ သငျ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုကို အသိအမှတျပွုမခံရဘူး ဆိုတာမြိုးတှေ ဖွဈနရေငျတော့ သငျ့ကိုယျသငျ ကောငျးကောငျးမထုတျဖျောနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရညျအခငျြးတှရှေိပွီး အလုပျကွိုးစားနရေုံနဲ့ မဖွဈပါဘူး။ သငျ့အရညျအခငျြးနဲ့ လုပျနိုငျစှမျးကို လောကကွီးကသိအောငျ လုပျနိုငျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ သငျ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျအတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ ရှထှေ့ကျရပျနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
သင်က အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်၊ အလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် အောင်မြင်မှုနဲ့ လွဲချော်နေတယ်။ သင်က ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းပြီး ခံစားသက်ဝင်မှုလည်း ကောင်းရဲ့သားနဲ့ အိုင်ဒီယာထုတ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာ ပါးစပ်ပိတ်အသံတိတ်နေရတယ်။ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို လုပ်ပြလိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကို သိထားပေမယ့် တကယ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာ ပင်ပန်းငြီးငွေ့ပြီး မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်လာတယ်။ တစ်ခုမှ ပုံမှန်မဟုတ်သလိုဖြစ်နေမယ်။ အကောင်းဆုံးလုပ်နေပေမယ့် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလာဘူး။ အလုပ်ကို အချိန်ပိုလုပ်ပြီး အာရုံစိုက်ထားချင်လို့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်ဘူး။
ဒီလိုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝဖို့အတွက် အလုပ်နဲ့ ဘ၀ ကြားမှာ သင်အခက်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးထားတာတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ မအောင်မြင်သေးတာလဲဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
အောင်မြင်ဖို့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားရမယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကြိုးစားနေရဲ့သားနဲ့ မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ကို အောင်မြင်မှုနဲ့အလှမ်းဝေးအောင် အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တာတွေကို ဆန်းစစ်ပြင်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုးရိမ်မှုက အောင်မြင်မှုကို အကျိုးမပြုပါဘူး။ အောင်မြင်ဖို့အတွက် သတ္တိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျရှုံးသွားမှာကို စိုးရိမ်နေရင် အမှားတွေလုပ်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်စိုးရိမ်သောကတွေက သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အ၀ အသုံးမချနိုင်အောင် ဟန့်တားနေမှာပါ။ အမှားလုပ်မိဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့ လူက အမှားတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ဖူးသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှားကို အလျှော့ပေးလို့ မရပါဘူး။ သောမတ်အက်ဒီဆင်သာ ကျရှုံးမှုကို စိုးရိမ်ပြီး စမ်းသပ်မှုနည်းနည်းလောက်လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ လက်လျှော့ခဲ့မယ်ဆိုရင် လျှပ်စစ်မီးလုံးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၂။ မိမိကိုယ်ကို မရိုးသားခြင်း
အခုလို ရွေးချယ်စရာတွေ များလွန်းလှတဲ့ခေတ်ကာလမှာ သင့်ရဲ့ ထူးခြားမှုနဲ့ သီးခြားဖြစ်တည်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အများနဲ့အတူရောလိုက်တာက လက်မခံနိုင်စရာမဟုတ်ပေမယ့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုကို ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာပါပဲ။ သင်ကိုယ်တိုင်က စိတ်မပါပေမယ့် အများကိုဆန္ဒကို လိုက်လျောလိုက်ရပြီး ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကို ထုတ်ဖော်မပြောဖြစ်လိုက်တာမျိုး ဘယ်နှစ်ခါ ဖြစ်ပြီးပြီလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အများနဲ့ ဆန့်ကျင်ရဖို့ကိုလည်း မကြောက်ပါနဲ့။ ခဏတာအတွက်တော့ အထီးကျန်သလိုဖြစ်နေပေမယ့် မိမိကိုယ်ကို အရိုးသားဆုံး ဖြစ်တည်ခွင့်ရမှာပါ။ အမီတာဘချမ်းဟာ သူ့အသံကြောင့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ငြင်းပယ်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင် ဘောလိဝုဒ်ရဲ့ ဂန္တ၀င်သရုပ်ဆောင်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာပြီး သူ့အသံကိုက ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိရိုးသားပါ။ သီးခြားဖြစ်တည်မှုကို လက်ခံပါ။
၃။ အလုပ်ကို အလွန်အကျွံအချိန်ပေးခြင်း
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး သောက်ဖို့စားဖို့တောင် အချိန်မပေးပဲ အလုပ်ကိုပဲ စောက်ချလုပ်နေသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပမေယ့် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညည်းညူနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်မှုနဲ့ ပြောဆိုမှုတွေက စိတ်အခြေအနေကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ထွက်ပေါ်စေပါတယ်။ အလုပ်ကို အလွန်အကျွံအချိန်ပေးနေမယ်ဆိုရင် အလုပ်ကို၊ အလုပ်ရှင်ကို၊ လုပ်နေရတဲ့ဘ၀ကို မုန်းတဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖူးလား ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
၄။ နှလုံးသားကပြောတဲ့စကားကို နားမထောင်ခြင်း
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က လုပ်ချင်တာမဟုတ်ပေမယ့် လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်လို့ ဒါမှမဟုတ် အများကလုပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်နေလို့ လိုက်လုပ်ကြရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် အများနဲ့ရောလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများနဲ့ရောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး သာမန်အဆင့်မှာပဲ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်နှလုံးသား၊ မသိစိတ်က ပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ပြီး ဘာလုပ်သင့်လဲဆုံးဖြတ်ပါ။ အများယောင်တိုင်း လိုက်မယောင်ပါနဲ့။
၅။ မိမိကိုယ်ကို အခြားသူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
စိုးရိမ်သောကများတဲ့သူအတွက် စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေက အမြဲတမ်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ သင့်ထက် ပိုတော်တဲ့၊ ပိုထက်မြက်တဲ့၊ ပိုသင့်တော်ပြီး ပိုပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အခြားသူတွေကို ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အခြားဘယ်သူနဲ့မှ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိတာက ကောင်းပေမယ့် မနာလိုတာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အချိန်နဲ့ ခွန်အားကို ဖြုန်းတီးပစ်ရာရောက်ပါတယ်။
အစီအစဉ်မရှိပဲ တုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက် ဘ၀ကိုရင်ဆိုင်တာက လန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ အစီအစဉ်တစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အစီအစဉ်လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း အသက်(၄၀)မှာ ငါ စီးအီးအိုတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းတိကျမှုမရှိတဲ့ အစီအစဉ်မျိုးမဟုတ်ပဲ နောက်နှစ်မှာ ဒီအရည်အသွေးတစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်နေရမယ် စတဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေနီးစပ်ပြီး ရှင်းလင်းတဲ့ အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်ကို ချစ်ပြီးကြိုးစားပေမယ့် ရည်မှန်းချက်မရှိပဲ လှုပ်ရှားနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
၇။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆိုးမြင်သမားတွေ များနေခြင်း
သင့်မိသားစုက သင့်ရဲ့အလုပ်ကို လေးစားမှုရှိရဲ့လား။ သင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကရော သင့်အလုပ်ကို ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တာတွေ ရှိပါသလား။ သင်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကောင်းမြင်တဲ့လူတွေ သင့်အနားမှာ ၀ိုင်းနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အလုပ်အပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်သက်ဝင်မှုနဲ့ အပြုသဘောဆောင်မှု ပျောက်ဆုံးပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိ ဖြစ်စေပါတယ်။
၈။ နေ့တစ်ဝက်ကို ဖြုန်းတီးပစ်ခြင်း
စောစောထတဲ့ငှက်တွေက အစာပိုရပါတယ်။ နောက်ကျမှ အိပ်ရာဝင်ပြီး မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာပေါင်းစားတာ၊ အလုပ်ကို နောက်ကျမှစလုပ်တာတွေက သင့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် မကောင်းပါဘူး။ တစ်ချို့တွေက ပြောကြပါတယ်။ သူတို့က ညနေပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တတ်သူတွေဖြစ်တာကြောင့် မနက်ခင်းက အရေးမကြီးဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ မနက်ခင်းမှာ အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်တောင်မှ ညနေခင်းမှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက် အစီအစဉ်ချတာ၊ စဉ်းစားတာတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့လူတွေက မနက်အစောကြီးကတည်းက အိပ်ရာထပြီး ကျွန်တော်တို့ မနက်စာစားနေတဲ့အချိန်မှာကတည်းက တစ်နေ့စာအလုပ်တွေကို စလုပ်နေကြပါပြီ။
၉။ ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်ခြင်း
နေ့စဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ ရှင်သန်နေရတဲ့ဘ၀မှာ အလဲထိုးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုက ကျန်းမာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စာမစားဖြစ်တာ၊ အမြန်စာတွေ အစားများတာ၊ ကော်ဖီနဲ့လက်ဘက်ရည်တွေ အသောက်များတာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက် အချိန်မပေးတာ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ စတဲ့အမူအကျင့်တွေက သင့်ရဲ့ အဟာရဓာတ်တွေကို လျော့နည်းစေပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ စွမ်းအင်တွေ နည်းသွားစေပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ခွန်အား မစိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဦးမှာ သေချာပါတယ်။
၁၀။ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာမဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
အရည်အချင်းရှိပြီး အလုပ်ကြိုးစားပေမယ့် ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ သင့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုမခံရဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် ကောင်းကောင်းမထုတ်ဖော်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းတွေရှိပြီး အလုပ်ကြိုးစားနေရုံနဲ့ မဖြစ်ပါဘူး။ သင့်အရည်အချင်းနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို လောကကြီးကသိအောင် လုပ်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ရှေ့ထွက်ရပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
Previous: အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသည့် ခရီးတစ်ခု
Next: လက်ရှိ အလုပ်က ထွက်သင့်တဲ့ လက္ခဏာ (၅)ခု